Konke Odinga Ukukwazi Ngokutholwa Kwezikhangiso | Martech Zone
Konke Odinga Ukukwazi Ngokutholwa Kwezikhangiso
NgoLwesihlanu, ngoJuni 16, i-2017 NgoLwesine, Juni 22, 2017 UGal Glikman
Enye yezinselelo ezinkulu kubashicileli nakunoma imuphi umakethi namuhla ukuvimba izikhangiso. Kubamakethi, ukukhuphuka kwamanani okuvinjelwa kwezikhangiso kuholela ekungafinyeleli kuzithameli ezivimbela ukukhangisa. Ngaphezu kwalokho, amazinga aphezulu okuvimba izikhangiso aholela ekusungulweni kwezikhangiso ezincane, ezingagcina zikhuphule amanani we-CPM.
Kusukela izivimbeli zezikhangiso zaqala ukusebenza eminyakeni eyishumi eyedlule, amazinga okuvimba akhuphuke kakhulu, athola izigidi zabasebenzisi futhi asabalala wonke amapulatifomu.
Okunye kokutholwe kwakamuva kwethimba lethu locwaningo ku Phezulu ukuthi isilinganiso samanje sokuvinjelwa kwezikhangiso e-US singama-33.1%. Lokhu kusho ukuthi abasebenzisi abathathu kwabangu-3 abadalulwa kwimizamo yakho yokumaketha. Ngokusobala, wudaba olucindezelayo lomhlaba wokumaketha, futhi ngokulandelana kuya emhlabeni wokushicilela, oncike ekukhangiseni ngobukhona bawo.
Kungenziwa kanjani lokhu?
Kuze kube manje, kunezindlela eziningi ezizama ukubhekana nalesi simo sokuvimbela. Abanye abashicileli bazama ukushintsha imodeli yabo yebhizinisi futhi basebenzise ama-paywalls ukukhokhisa abasebenzisi ukufinyelela kusayithi labo. Abanye, bakhetha ukuphoqa abasebenzisi babo ukuthi bagunyaze iwebhusayithi yabo ngezilungiselelo zesikhangiso ukuthola ukufinyelela kokuqukethwe kwesayithi. Ukuwa okuyinhloko kwalawa maqhinga womabili ukuphazamiseka kwawo kanye nengozi abasebenzisi abazoyenza shiya isiza ngokuphelele.
Yilapho enye indlela ingena khona - ukuthola kabusha isikhangiso.
Ukuvuselelwa kwesikhangiso kuvumela abashicileli ukuthi baphinde bafake izikhangiso ezazisuswe ekuqaleni yizivimbeli zezikhangiso. Lelisu linezinzuzo ezithile ezihlukile kulo lonke iphakethe. Inzuzo esobala ukukwazi ukuthumela izikhangiso kuzithameli ezivimbela kanye nezingavimbeli. Abashicileli bazokwazi ngisho nokwandisa uhlu lwabo lwezikhangiso, abasebenzisi bamasegmenti futhi bakhombe imikhankaso ethile kwizithameli ezivimba izikhangiso nezingavimbeli isikhangiso.
Ngokuphikisana nalokho okungalindelwa, abasebenzisi be-adblocking baze babonise amazinga aphezulu wokuzibandakanya, kwesinye isikhathi ephakeme kunabasebenzisi abangavimbeli.
Yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene zezixazululo zokutakula izikhangiso?
Kunezisombululo ezimbalwa emakethe namuhla. Lapho uhlola ezahlukahlukene, kufanele kukhunjulwe imingcele ethile ebalulekile. Eyokuqala ukuhlanganiswa - izixazululo zokutakula izikhangiso zingasetshenziswa ohlangothini lweseva, i-CDN (Inethiwekhi Yokulethwa Kokuqukethwe) noma ohlangothini lwamakhasimende. Kokubili ukuhlanganiswa kwe-server-side ne-CDN kuyinkimbinkimbi futhi kuyaphazamisa kakhulu, futhi imvamisa kudinga izinguquko ezinkulu engxenyeni yomshicileli kufaka phakathi ukusebenza kwezikhangiso.
Iningi labanikazi bamasayithi liyakwesaba ukuhlangana okunje, okuyisithiyo esikhulu, futhi kaningi bancamela ukungasifaki isixazululo. Ngakolunye uhlangothi, ukuhlanganiswa okuningi kohlangothi lwamakhasimende kunqunyelwe futhi kungavinjelwa yizivimbeli zesikhangiso.
Okunye ukwahlukanisa okubalulekile phakathi kwezixazululo ezahlukahlukene zokubuyiselwa kwezikhangiso ukuphelela kwazo. Lokhu kufaka phakathi ukuthi yiziphi izingxenyekazi abasebenza kuzo, nokuthi yiziphi izikhangiso abangazithola.
Ngaphezu kwalokho, ngenkathi abashicileli befuna ukwethula zonke izinhlobo zezikhangiso, kufaka phakathi izikhangiso ezimile, izikhangiso zevidiyo, nezikhangiso zomdabu, ezinye izixazululo zokuthola izikhangiso zingabuyisa uhlobo olulodwa kuphela lwezikhangiso.
Liyini ikhambi likaPoverit?
I-Juuit inikeza ipulatifomu yokutholwa kwesikhangiso ebandakanya bonke abantu, ekwazi ukubuyisela konke ukufakwa kwesikhangiso okwehlulwe yizivimbeli zesikhangiso, kuzo zombili iziphequluli zeselula neze-desktop. I-Onit ibuyisa imikhankaso yesikhangiso, yevidiyo neyomdabu, ngokulandela ngomkhondo okuphelele kwe-pixel, ukuqondiswa kwamakhukhi, nokusekelwa kwesigaba somsebenzisi.
Isixazululo sethu sincike ekuhlanganisweni okusheshayo, kohlangothi lwamakhasimende, okuvumela ukuhlanganiswa oku-seamless okungadingi zinguquko kumaseva wesikhangiso wamakhasimende ethu noma ekusebenzeni kwezikhangiso.
Inhloso kaPoverit ukunika amandla abanikazi besiza ukuthi bakwazi ukugcina imodeli yabo yebhizinisi, ngenkathi futhi befuna ulwazi lwabasebenzisi. Sisebenza ngokuhambisana ne- Imihlahlandlela yokuhlanganiswa kwezikhangiso ezingcono, esizizwa sibekelwe indawo ephakathi nendawo bobabili abashicileli nabasebenzisi.
Usebenzisa i-Pitit, umshicileli angalawula ukuthi iziphi izikhangiso ezinikezwayo nokuthi zibekwa kuphi, futhi aqiniseke ukuthi lezi kuphela ezisezingeni eliphakeme nezingaphazamisi. Ngaphezu kwalokho, isixazululo sethu kufaka isandla ekuhlangenwe nakho okungcono komsebenzisi, ngokusheshisa izikhathi zokulayisha ikhasi nokunciphisa ukusetshenziswa komkhawulokudonsa.
Isebenza kanjani i-Onit?
Umphumela uba ukuthi izikhangiso zikhonjiswa kumsebenzisi we-adblocking, noma ngabe isiphi isivimbeli sesikhangiso esisetshenziswayo.
Khuphula imali engenayo yesikhangiso, khuphuka ekuzibandakanyeni
Lapho isilinganiso sokuvimbela isikhangiso se- Mako, Ingosi yezokuzijabulisa ehamba phambili kwa-Israyeli, ifinyelele kuma-33% futhi yalimaza kakhulu ukusebenza kwabo okususelwa kuzikhangiso, baqala ukufuna isisombululo. Njengoba u-Uri Rozen, isikhulu esiphezulu sikaMako esho, iPoverit ukuphela kwesixazululo esivumele ukugcina ibhizinisi labo lezikhangiso lisebenza ngaphandle kweziphazamiso. Ngokusebenzisa isixazululo se-uponit, uMako ukwazile ukunikeza imikhankaso yezikhangiso ekuvimbeleni abasebenzisi kusukela ngoJuni 2016, futhi muva nje, uqale ukukhangisa ngezikhangiso zevidiyo esigabeni sezindatshana nesevisi yabo ebanzi ye-VOD. Igalelo lePoverit emalini ekhangiswa yisikhangiso sedeskithophu kaMako kuholele ekukhuleni okukhulu kwama-32% -39% phakathi kukaJanuwari noMeyi wango-2017.
Ngokusho kukaRozen, abasebenzisi be-adblocking bakhombise amazinga afanayo noma aphakeme kakhulu okubandakanya nokugcina kunabasebenzisi abangavimbeli, ngesikhathi esimaphakathi sesikhathi sikhula ngo-3.2%.
UMako uyisibonelo esisodwa kuphela sabalingani bethu abaningi abajabule.
Thola Okungaphezulu ku-Phezulu
Tags: isikhangiso esivimba ukululamaukululama kwesikhangisoizixazululo zokubuyiselwa kwezikhangisoukuvimba isikhangisoukuvimbelaumfelandawonye wemikhombandlela yezikhangiso engconoIsraelmakophezu
UGal Glikman uyi-CEO futhi Ungumsunguli we Phezulu, Isixazululo sokubuyiselwa kwesikhangiso sabashicileli be-premium. Ngaphambi kokubambisana uPoverit, uGal wasebenza ophikweni lwezobunhloli be-elite eMbuthweni Wezokuvikela wakwa-Israyeli njengesikhulu, umcwaningi nomphenyi wezokuphepha iminyaka eyi-4.5.
Indlela UJulius Ayinyusa Kanjani I-ROI Yokukhangisa Okunomthelela